မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန် ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန် ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ
မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန် ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ
Posted by AKKO on Feb 8, 2012 in Health & Fitness, Short Story | 18 comments
ကိုယ်ဝန် တားဆေးများအကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဈေးကွက်ထဲမှ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေကို ပေါပေါများများ သုံးစွဲနေကြပေမယ့် ၊ ကလေးမရနိုင်ရန် ကာကွယ်ရန်အတွက်အတွက်ဟု ယေဘုယျလောက်သာ သိကြပြီး ၄င်းတို့ဧ။် အကျိုးအပြစ်များကို သိသူ နည်းသေးတဲ့အတွက် ဗဟုသုတအနေဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည် ။
စာရေးသူဆေးခန်းတွင် လာပြသော အမျိုးသမီး တစ်ဦးအကြောင်းမှ စပြောပါမည် ။ ထိုအမျိုးသမီးသည် ထူးဆန်းသည် ။ ထူးဆန်းသည်ဟုဆိုရာတွင် နတ်သမီးလို လှပခြင်းကြောင့်လည်း မဟုတ် ၊ ဦးချိုပေါက်နေခြင်းကြောင့်လည်း မဟုတ် ၊ ခေါင်းနှစ်လုံး ပါ၍လည်းမဟုတ် သို့သော် ကျွန်တော့်အတွက် ထူးဆန်းသူဖြစ်သည် ။ ထူးဆန်းသည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ သူမသည် လင်ယောကျာင်္းမရှိပါပဲ (သုံးလ) တားဆေးလာထိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ လင်ယောကျာင်္းမရှိသော်လည်း မလွတ်မကင်နိုင်သော ကိစ္စများကြောင့် တခြားရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထိုးသူများလည်း ရှိပါသည် ။ သူမမှာ ထိုလူများကဲ့သို့မဟုတ်ပါပဲ လိင်ကိစ္စ အရှုပ်ရှင်း မရှိပါလျှက် သုံးလဆေးလာထိုးနေခြင်းဖြစ်သည် ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ဆေးထိုးရခြင်း အကြောင်းကို မေးကြည့်သောအခါမှ ဇာတ်ရည်လည်စွာ နားလည်တော့သည်။
ထိုအမျိုးသမီးသည် ညောင်းညာကိုက်ခဲလွယ်သည် ၊ မကြာခဏ ပင်ပန်းလွယ် နွမ်းလွယ်သည် ထို့ကြောင့် အိမ်နီးနားခြင်းဖြစ်သူက ကိုယ်ဝန်တားဆေး (သုံးလ)ဆေးထိုးလျှင် အညောင်းညာပြေသည် ၊ အကိုက်ခဲပျောက်သည် ၊ နေ၍ထိုင်၍ကောင်းသည် စမ်းထိုးကြည့်ရန် တိုက်တွန်းသဖြင့် သူမလည်း စမ်းထိုးကြည့်ရာ ကိုက်ခဲသော ဝေဒနာများ သက်သာသဖြင့် သုံးလ တစ်ကြိမ် မှန်မှန် ထိုးနေကြဖြစ်ပြီး သုံးကြိမ်မြောက်ပင် ထိုးပြီးခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်းပြောသည် ။ စာရေးသူမှာ သူမဧ။် အထူးဆန်းစကားများအောက်တွင် အံ့သြမှင်သက်မိကာ ခဏမျှ လွင့်မျောသွားမိပြီး ၊ ခဏအကြာမှ သတိကပ်ကာ ထိုလူနာအား တားဆေးများဧ။် အကျိုး အပြစ်များကို ရှင်းပြ၊ ပြောပြပေးရတော့သည် ။ ထို လူနာကိုပြောပြခဲ့သလို ရွာသူရွာသား စာဖတ်သူတို့ကိုပါ ဗဟုသုတရစေရန်နှင့် ၊ ဆရာထက်ဝေး တောင်းဆိုထားသော 72 pillsအကြောင်းကိုပါ ပြောပြရန် ရှိသေးတာကြောင့် အကြမ်းဖျဉ်း ရေးသားလိုက်ပါသည် ။ အိမ်ထောင်သည်များ အတွက်ရော ၊ အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်လာမည့် သူများအတွက်ပါ အကျိုးရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည် ။
မိမိဧ။်ဆေးခန်းတွင် ကိုယ်ဝန်တားရန် လာရောက်တိုင်ပင်သော အမျိုးသမီးများကိုလည်း တားဆေးတို့ဧ။် အစွမ်း သတ္တိနှင့် အကျိုးအပြစ်များကို ယှဉ်တွဲရှင်းပြကာ သင့်လျှော်သော တားဆေးများ ရွှေးချယ်နိုင်ရန်လည်း အကြံပေးခဲ့သည် ။ အချို့သော အိမ်ထောင်ရှင်မများသည် ခင်ပွန်းများပါ ခေါ်လာပြီး စနစ်တကျ သားဆက်ခြားရေးအတွက် ကြိုတင်ဆေးနွေး ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်လာကြခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သော ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းကို ကာကွယ်ရာရောက်သည် ။ ကိုယ်ဝန်မရချင်လျှင် ကြိုတင် ကာကွယ်နည်းများစွာရှိသည် မဆင်မခြင်နေခြင်းဖြင့် ရလာသော ကိုယ်ဝန်အပေါ်တွင်တော့ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ ဖျက်ချပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း ” ကိုယ်ဝန်လုံးဝ မဖျက်ပေးပါ ” ဟူသော စာကို ဖောင့်ဆိုဒ်ကြီးကြီးဖြင့် ပရင့်ထုတ်ကာ ဆေးခန်း နံရံတွင် ကပ်ထားရသည် ။ တားဆေးထိုးရန် လာသော လူနာသည် တစ်ခါတစ်လေတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးတည်းလာပြီး ၊ တစ်ခါတစ်လေတွင် ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးစလုံးလာသည် ။ တစ်ချို့ကျတော့ အခုမှ အိမ်ထောင်ကျခါစ အခုမှ တားဆေးထိုးမည့် လူများ ပါသလို ၊ တစ်ချို့ကတော့ အိမ်ထောင်သက်ရှည်ကြာစွာ တားဆေး သုံးစွဲသူများပါသည် ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တားဆေးသုံးမည့်သူသည် တားဆေးဧ။် အကျိုးပြစ်အကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်းတော့ သိထားနားလည်သင့်သည် ။ (Abuse) လွဲမှားစွာ အသုံးပြုရန် မဟုတ်ပါ ၊ single များအတွက် မရည်ရွယ်ပါ ။ တားဆေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သင့်လျှော်သော အမျိုးစား ရွှေးချယ်တတ်စေရန် အိမ်ထောင်ရှင်များ ၊ အိမ်ထောင်ပြုမည့်သူများအတွက် စေတနာပရပွဖြင့် ရေးသားလိုက်ပါသည် ။
♠♠♠ အီစထရိုဂျင်နှင့် ပရိုဂျက်စထရိုဂျင် ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးပါစားဆေး
♠♠♠ ပရိုဂျက်စထရိုဂျင် ဟော်မုန်း တစ်မျိုးသာပါသော စားဆေး
♠♠♠ ထိုးဆေးများ ( ၁လခံ ၊ ၃လခံ)
♠♠♠ သားအိမ်တွင်း ပစ္စည်းထည့်နည်း
♠♠♠ ကွန်ဒုံးများ (ယောကျာ်းသုံး ၊ မိန်းမသုံး)
♠♠♠ ဆက်ဆံပြီးနောက် သန္ဓေတားခြင်း
♠♠♠ မိန်းသားကြောဖြတ်ခြင်း ၊ ယောကျာ်း သားကြောဖြတ်ခြင်း
♠♠♠ သုတ်ပိုးများ သတ်ဆေး
♠♠♠ သားအိမ်ခေါင်း အုပ်ဆောင်းများ ( cervical caps)
♠♠♠ မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုအပေါ် အခြေခံတားသော နားလမ်းများ
♠♠♠ ကလေးမွေးဖွားပြီး နို့တိုက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ဝန်မရစေသော နည်း
♠♠♠ လက်မောင်းကြွက်သား အရေပြားအောက် ခွဲထည့်သော တားဆေးများ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည် ။
(၁) ဟော်မုန်း ပါသော သန္ဓေတားစားဆေးများ
စားဆေးလို့ဆိုကတည်းက ပါးစပ်က သောက်ရတာမှန်း လူတိုင်း သိမှာပါ ။ ဆေးမှာ အီစထရိုဂျင်နှင့် ပရိုဂျက်စထိုဂျင် ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ ဆေးရှိသလို ၊ပရိုဂျက်စထိုဂျင်တစ်မျိုတည်းပါရှိတဲ့ဆေးများ ရှိပြီး သားဥကြွေခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည် ။ ကလေးမရနိုင်စေရန် သောက်ဆုံးကြပါသည် ။
ဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုးမှာ ကိုယ်ဝန်တားပေးနိုင်ပြီး ၊ ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်ခြေနည်းသည် ။ သုံးရလွယ်ပြီး ၊ ၀ယ်ရလွယ်သလို ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တင့်သည် ။ ပုံမှန်ရာသီ ပြန်လာတတ်သော်လည်း သွေးဆင်းနည်းတတ်သည် ။ မိန်းမရာသီကြောင့် ကိုက်ခဲခြင်း ၊ မီးယပ်ရောဂါတွေ၊ မီးယပ်ကင်ဆာရောဂါတွေ ၊ သန္ဓေသား နေရာမမှန်တာတွေဖြစ်ခြင်း လျော့နည်းစေပါသည် ။ ဆေးသောက်သုံးမှု ရပ်လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ်ဝန်ပြန်ရနိုင်ပါသည် ။
ဆေးရဲ့ ဆိုးကျိုးကတော့ ခေါင်းကိုက်တာ ၊ ပျို့အန်ချင်တာ ၊ မျက်နှာမှာလည်း အမည်းစက်တွေ ပေါ်လာတတ်တာ ၊ ဖောယောင်လာတာ ၊ ၀လာတာ ၊ ရင်သားတင်းရင်းလာတာ ၊ ပုံမှန်ရာသီလာရင်း ကြားပေါက်ရာသီဆင်းတတ်တာ ၊ သားအိမ်ခေါင်းမှ အရည်များ ပိုဆင်း တတ်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
နှလုံး သွေးတိုးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေ ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည် ။ ရင်သားကင်ဆာလည်းဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးသောက်ပြီး ရာသီမလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ။ ပိုးသတ်ဆေး ၊ မှိုသတ်ဆေး ၊ အတက်ရောဂါကျ ဆေးများသောက်လျှင်လည်း တားဆေးရဲ့ အာနိသင်ပြောင်းလဲမှု ရှိတတ်သည် ။ အသက် ၃၅ နှစ် အထက်နှင့် ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူတွေ မှာတော့ သေဆုံးမှု နှုန်း ပိုမြင့်တတ်သည် ။ လုံးဝ မသုံးသင့်တဲ့ လူတွေကတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိသူများ ၊ နှလုံး သွေးတိုးနှင့် သွေးကြောရောဂါရှိသူများ ၊ အသည်းရောဂါရှိသူများ ၊ ကင်ဆာရောဂါရှိသူများ ၊ အသည်းရောင် အသားဝါ ဖြစ်နေသူများ ၊ ကလေးနို့တိုက်နေသော မိခင်များ ဖြစ်သည် ။ Failure rate : ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ခြေကတော့ ၀.၁% လောက်ပဲ ရှိပါသည် ။
(၂) ထိုးဆေး (၁လခံ ၊ ၃လခံ)ဆေး
ထိုးဆေးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်သည်လည်း သားဥကြွေခြင်းကို တားဆီးပေးခြင်းပါပဲ ။ သားအိမ်ခေါင်းက အရည်များကို ပိုမိုကာ ပျစ်ချွဲစေပါတယ် ။
ထိုးဆေးတွေရဲ့ ကောင်းကွက်ကတော့ ကိုယ်ဝန်မရအောင် ကောင်းကောင်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပြီး ၊ သားအိမ်ကြော (သားကြော)ဖြတ်ပြီးပြီးချင်း ထိုးနိုင်ပါသည် ။ စိတ်ဝေဒနာရှင် အမျိုးသမီးများအတွက်သုံးရတာ အဆင်ပြေပြီး ၊ ကလေးမွေးပြီး ကာကွယ်ဆေး ( vaccine) ထိုးရသော မိခင်များလည်း သုံးနိုင်သေးသည် ။
ထိုဆေးရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ရာသီ မမှန်တတ်သလို ၊ ရာသီ မပေါ်ပဲ ပျောက်နေချိန် ကြာမြင့်တတ်သည် ။ ကိုယ်ဝန်ပြန်ယူဖို့ ဆေးရပ်မယ်ဆို လျှင် ချက်ချင်း ကိုယ်ဝန်မရတတ်ပဲ ပြန်စောင့်ရတတ်သည် ။ အများ ဆုံး ၁၈ လလောက်ထိ ပြန်စောင့်ရတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါသည် ။ Failure rate အနေနဲ့ကတော့ ၀.၅% ကနေ ၁.၅% လောက်သာ ရှိပါသည် ။
(၃) သားအိမ်အတွင်း ထည့်သော ပစ္စည်း
ထိုပစ္စည်းကို intrauterine Contraceptive Devices (IUCDs) လို့ခေါ်ပြီး ၊ ၄င်းကို ကြေးနီ (copper) ၊ ပလပ်စတစ်တို့နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါသည် ။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်(action)တွေကတော့ သားအိမ်အတွင်းမှာ အနည်းငယ် ယောင်ရမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည် ။ သား ဥပြွန်ရဲ့ ရွှေ့လျားမှုကို တိုးစေတတ်သည် ။ သန္ဓေတည်တာဟာ သား ဥပြွန်ထဲမှာ တည်တာပါ ၊ လှုပ်နေတဲ့အခါ သန္ဓေမတည်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ သဘောပါ ။
သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကတော့ အချိန် အကြာကြီး ကိုယ်ဝန်တားနိုင်သည် ။ ငါးနှစ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ နို့တိုက်မိခင်တွေပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပစ္စည်းလေး ပြန်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ပြန်ယူလို့ ရပါသည် ။ ထည့်ပြီး မိမိနှင့် အဆင်မပြေဘူးဟု ခံစားရလျှင်လည်း ပြန်ထုတ်နိုင်ပါသည် ။
ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ ၃နှစ်ကနေ ၅ နှစ်အတွင်း အသစ်ပြန်လဲ ပေးရတာမျိုး ၊ တင်ပဆုံရောင်ရမ်းတဲ့ရောဂါနှင့် သွေးဆင်းများတာမျိုး ဖြစ် နိုင်ပါသည် ။ မိန်းမရာသီလာချိန်တွေမှာ ကိုက်ခဲနေတတ်သည် ။ ထည့်ထားရင်းနဲ့လည်း ပြန်ထွက်သွားတတ်သည် ။ဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်းကတော့ ၃%ထက်တောင် ပိုနည်းပါသေးသည် ။ထည့်ထားရင်းနဲ့ သားအိမ်အတွင်းနှင့် သားအိမ်အပြင်မှာရော ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသည် ။
လုံးဝမသုံးသင့်သူများကတော့ အရင်က ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့သူတွေ ၊ တင်ပဆုံရောင်ရမ်းရောဂါရှိတဲ့ လူတွေ ၊ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ ၊ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါရှိတဲ့ လူနာတွေ၊ သားအိမ်အခေါင်းပေါက် (cavity)လိမ်နေတဲ့ လူတွေ ၊ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ ၊ HIV ပိုးရှိသူတွေအနေနဲ့ လုံးဝ မသုံးသင့်ပါဘူး ။ Failur rate : အနေနဲ့ကတော့ ထည့်ထားတဲ့ IUDs ပစ္စည်းပေါ် မူတည်ပြီး ၀.၃% ကနေ ၂%လောက်ပဲ ရှိပါသည် ။
(၄) ကွန်ဒုံး (condoms) ကတော့ သုတ်ပိုးတွေ မိန်းမကိုယ်ထဲ မ၀င်အောင် တားဆီး(barrier) လုပ်ပေးတဲ့နည်းပါ ။ ကောင်းတကာတော့ ဈေးသက်သာပြီး မသုံးရမည့် အခြေနေမျိုး လုံး ၀မရှိတာ အတွက်ကြောင့်ပါပဲ ။ ၀ယ်ရတာရော ၊ အသုံးပြုရတာအပြင် ၊ လွင့်ပစ်ရလည်း လွယ်ပါသည် ။ လိင်မှ တဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည် ။ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိပါ ။ ထို့ကြောင့် တခြားနည်းများနှင့် အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်သည်များအတွက် အလွန် အသုံးဝင်သော သားဆက်ခြားနည်း ဖြစ်ပါသည် ။
သတိထားသင့်တာကတော့ ကျွတ်ထွက်တတ်သည် ။ ပေါက်ပြဲ တတ်သည် ။ တချို ကာမဂုဏ်ခံစားမှု အားမရသလိုဖြစ်ကြပြီး ” အလွှာပါးလျှင် ကမ္ဘာခြားတယ် “လို့တောင် တင်စားပြောဆိုခဲ့ကြသည် ။ Failure rate :အ နေနဲ့ကတော့ ၄% ကနေ ၁၀%ပါ ။ ပေါက်သွားတာရယ် ၊ ကျွတ်သွားတာရယ်ကို မသိလိုက်တာရယ်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ပါတယ် ။
(၅) အရေးပေါ် လိင်ဆက်ဆံပြီး တားတဲ့ ဆေးကတော့ ဟော်မုန်း ၂မျိုးကို high dose နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ သောက်ဆေး နှစ်လုံး ပါပဲ။ သားဥပြွန် လှုပ်ရှားမှုကို များစေပြီး သန္ဓေမတည်အောင် လုပ်ပေးထားတာပါ ။ အကာကွယ်မဲ့ ဆက်ဆံပြီး ၇၂ နာရီ (သို့) ၄ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ဆေးသောက်ပြီး ပျို့အန်တတ်သည် ။ ဒါ့ပြင် ဆေးသောက်ပြီးကိုယ်ဝန် ရသွားတာမျိုးလည်း ရှိသည် ။ ၁၀၀% စိတ်ချလို့တော့ မရနိုင်ပါ ။ ကိုယ်ဝန်မရတာ တားဆီးပေးရမည့် အမျိုး သမီးတွေကိုသာ ဆရာဝန်တွေက အွန်(on)ပေးတဲ့ ဆေးမျိုးပါ ။ ဥပမာ- မုဒိမ်းကျင့်ခံရသော အမျိုးသမီး ၊ စိတ်ရောဂါသည် အမျိုးသမီးတို့အတွက်သုံးခြင်း ဖြစ်သည် ။
ယခုအခါ တော်တော်များများသည် လွဲမှားစွာ မိမိသဘောနှင့် သုံးနေကြသည် ။ စာရေးသူဧ။် ဆေးခန်းကို ဆေးဆိုင်နှင့် မှားကာ ထိုဆေးလာမေးသူများလည်း ရှိသလို ၊ စူပါမားကတ်များရှိဆေးကောင်တာတွင်လည်း ရှက်သလိုလိုမျက်နှာနှင့် ပြုံးဖြီးဖြီးလုပ်ကာ ထိုဆေးလာဝယ်သော အမျိုးသမီးငယ်လေးများကိုလည်း မြင်ခဲ့ဖူးသည် ။
အချုပ်အားဖြင့် သတိပေးလိုတာကတော့ မည်သည့် တားဆေးမှ ၁၀၀% စိတ်မချရပါဘူး ။ သုံးနေရင်းနှင့်ပင် အကျိုးကြောင်း မတိုက်ဆိုင်စွာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသည် ။ တစ်လ တစ်လုံးသောက်သော ဆေးသည် လုံးဝ စိတ်မချရပါ ။ (မသုံးသင့်ပါ) ။ နိုင်ငံခြားသွားကာ အလုပ်လုပ်မည့် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ထိုဆေးသောက်ထားပြီး သွားခါနီးမှ ကိုယ်ဝန်ရှိသောကြောင့် နိုင်ငံခြား မသွားဖြစ်တော့သည့် အဖြစ်ပျက်များလည်း မျက်ဝါးထင်ထင်ကြုံဖူးခဲ့သောကြောင့် သတိနဲ့ ယှဉ် ဆင်ခြင်စေရန် ရေးသားလိုက်ပါသည် ။ ကလေးမလိုချင်လျှင် ကနဦးကတည်းက ကိုယ်ဝန်မရစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမျိုးပြုလုပ်ထားသင့်ကြောင့်လည်း အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတော့သည် ။
ဆရာထက်ဝေးမေးထားတဲ့ 72pills အကြောင်းလည်း တစေ့တစောင်းလေး ထည့်ရေးပေးထားပါသေးတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဘသူ့ သွားမေးလို့ မေးရမှန်းလဲမသိ..ရှက်ကလဲ ရှက်သေးဆိုတော့.
ခုမှ ဒေါင်တာပြောပေးမှ သိရပါတော့တယ်…
ကျန်တဲ့ မောင်နှမတွေကိုလဲ ဖတ်ရအောင် ပို့ ပေးလိုက်ပါဦးမယ်..
သတိတရရှိတာ လေးစားပါတယ် ဒီဆောင်းပါးက သိပ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ကြောင်ကြီးကို အမေကိုယ်ဝန်မလွယ်ခင် မရအောင်တားသေးသတဲ့ ( ငယ်စဉ်ကပြောဖူးတာပါ၊ ဘယ်လိုတားသလဲတော့ မမေးမိဘူး ) ဒါပေမယ့် ကြောင်ကြီးလေ ကြောင်ကြီး… လူတွေထက် ပိုလည်လို့ ကြောင်လုပ်နေတာ၊ ဘယ်ရမလဲ ဒိုင်ဗင်ပစ်ဝင်လာတာပေါ့
အမယ်..ပေါ့သေးသေးတော့ မထင်နဲ့နော်… အမျိုးအဒေါ်ကြီးတယောက်က ပြောဖူးတယ်… ကျနော့်အမေဗိုက်ထဲဆိုလား အိမ်ထဲကိုဆိုလး လေယာဉ်ပျံထိုးစိုက်ဆင်းသွားတယ် အိမ်မက် မက်ပြီး မကြာခင် အမေ ကျနော့်ကိုယ်ဝန်ရှိတော့တာပဲ…။
ကောင်းကျိုးပေးမပေးတော့ မသိဘူး…အမေ ကျုပ်အတွက်နဲ့ မျက်ရည်ကျ၊ စိတ်ပူရတာ ငယ်စဉ်ထဲက အခုအချိန်အထိပဲ…။ မပူပါနဲ့ အမေရာ…ကြောင်ကြီးချမ်းသာလာရင် အမေကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်ပေါက်တိုင်းကို စိန်ခဲတွေနဲ့၊ ပူပင်သောကထွက်ခဲ့ရတဲ့ စက္ကန့်တိုင်းကို ဒေါ်လာနဲ့ချိန်ဆက်ပြီး ပြန်ဆပ်ပါ့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ လူကြုံနဲ့ ငါးပိကြော်ပို့ပေးပါ…။
သားမိုက် (ယခုအချိန်အထိသာ) ကြောင်ကြီး
မလွယ်ရအောင် တားပေမယ့် (ဘယ်လိုတားလည်းမသိ) .. ရလာတော့လည်း … ယူလိုက်တာ … လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ … အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုမူပါပဲ ..ကိုကြောင်ကြီးရေ … ။
ရပြီး တာဝန်မဲ့စွာ ရက်စက်တာနဲ့တော့ .. နှိုင်းယှဉ်လို့မရအောင် သာလွန်းပါတယ် … ။
ကျေးဇူး ဗျာအခုလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးပေးတော့ ဗဟုသုတအနေနဲရော လက်တွေလိုက်နာဖို.ရော သေသေချာချာသိသွားတာပေါ့…… မသိသူရှိရင်လဲ ကိုယ်ကတဆင့်ပြောပြပေးလို.ရတာပေါ့……
ဘယ်တားဆေးမှ ၁၀၀% စိတ်မချရဘူးဆိုတာကိုပဲ အသေမှတ်သွားပါတယ် ဆရာရေ့…
ဒါနဲ့တားဆေးသုံးရင်း တားမရဘဲထွက်လာတဲ့ ကလေးမှာရော ကြီးမားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိရင် သိချင်ပါသေးတယ်ဗျ..
အခုတော့ မလိုသေးပေမဲ့ အရေးကြုံရင် သက်လုံကောင်းအောင် စူးစမ်းထားတာပါ.
အမတ်မင်းနဲ့ ရွှေတိုက်စိုး … မှတ်မှတ် …သေချာမှတ် … နောက်တော့ အသုံးဝင်လိမ့်မယ် … ။
ကော့မန့်တွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့မှ … သူတို့ကိုယ်သူတို့ .. မသိမသာ ကြော်ငြာဝင်ထားတာပါလား …
ကျွန်တေ်ာမေးချင်တာတခုက ec2 ပါ
ဟုတ်တယ်ဗျ ဆရာAKKO ရေ cobra မေးတဲ့ဆေးအကြောင်း
AKKO ရေ –
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လေးတွေ ပါသိတော့ တော်ရုံဆို မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ချင်တဲ့စိတ် ရကြတာပေါ့။
ဒီလိုလေး အချိန်ပေးပြီး ဆေးပညာဗဟုသုတလေးတွေ ဝေတာ ကုသိုလ် တကယ်ရပါတယ်။
တော်တော်များများ က အလွယ်ရတာ သုံး နေပြီး အန္တရာယ် ရှိတာကို သိတောင်သိမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဆက်ပြီးအားပေးနေပါ့မယ်။ အချိန်လေးရတိုင်း ဒီလိုလေးတွေ ရေးပေးပါကွယ်။
ဗဟုသုတ အများကြီးရသွားပါကြောင်း။ တခြားလူတွေလဲပြန်ပြောပြပါမယ်။ပညာပေး အနေနဲ့။
AKKO ရေ…သိချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ် ထုိးဆေးထိုးတာလေးပေ့ါ…သူများတွေလည်းဗဟုသုတရအောင် ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်….အမျိုးသမီးတွေက အိမ်ထောင်စကြကြချင်းမှာ ကလေးမလိုချင်ရင် ထိုးဆေးသောက်ဆေးနဲ့ တားတတ်ကြပါတယ်…. ထိုးဆေးကိုဒီနေ့ယောက်ျားယူ ဒီနေ့စထိုးရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ကြားဖူးပါတယ်…. ထိုးဆေးထိုးရမယ့်အချိန် ထိုးပြီးရင်လည်း အမျိုးသားနဲ့ချက်ချင်းနေလို့မရဘူးလို့ကြားဖူးပါတယ် ဟုတ်ပါလား …..အဲဒါလေးကို ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်..
အိမ်ထောင်ကျပြီး ခါစမှာ ထိုးဆေးတွေဆက်တိုက်ထိုးခဲ့ပြီးမှ … တကယ်ကလေးလိုချင်လာတဲ့အခါ ကလေးမရနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလဲ ကြားဖူးနေပါတယ်..အဲဒါမျိုးတွေကော တကယ်ရှိပါသလား …
ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာ…ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖြေကြားပေးပါရှင်…..
amm ရေ တားဆေးသုံးရင်း ကိုယ်ဝန်ရသွားရင် သန္ဓေသားမှာ ကြီးမားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ သိသိသာသာကြီးမရှိပါဘူး။ တခြားဆေးတွေပါ မသောက်ထားဘူးဆိုရင်ပေါ့။ တချို့ ဆေးတွေဟာ သန္ဓေသားကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်သည်တွေကို တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
cobra ပြောတဲ့ ဆေးက ၂ခါထက်ပို သုံးလည်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။ side effect လည်းများပါတယ်။ မိမိသဘောနဲ့ မိမိလုံးဝမသောက်သင့်ပါ။ မသိလို့ သောက်နေကြတာရယ်၊အတင်းတိုက်လို့ သောက်ကြတာ များပါတယ်။ သောက်ပြီးဆေးခန်းလာပြကြတဲ့ လူလည်းများပါတယ်။
ခိုင်ရေ ရာသီလာတဲ့ အချိန်နဲ့ ဆေးထိုးတဲ့ အချိန် ပြန်တွက်ပြီးမှ အမျိုးသားနဲ့ နေလို့ ရမရ ပြောနိုင်မှာ။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ ချက်ချင်းထိုးချက်ချင်းမကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။
ဂျူးမလေးရေ တားဆေးတွေဆက်တိုက်ထိုးတာအကြိမ်ရေများရင် ချက်ချင်းကိုယ်ဝန်မရနိုင်ပါဘူး။ လပိုင်းလောက်ပြန်စောင့်ရပါတယ်။ အကြမ်းမျဉ်း ၄လ က ၉လ လောက်အထိပြန်စောင့်ရပါတယ်။
AKKO ရေ ထိုးဆေးကို ရာသီပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲထိုးမှ ဆေးရဲ့အာနိသင်က သက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ဆိုတာဟုတ်ပါလား တကယ်လို့ရာသီပေါ်တဲ့အချိန်ဆိုတာပေါ်ပြီးလား ပေါ်နေတုန်းလား ဘယ်လိုအချိန်လဲဆိုတာလေးလဲ ဆက်လက်ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်
ဒီလိုမေးရတာက အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုကိုကြားဖူးလို့ပါ ဆေးခန်းတစ်ခုကဆရာဝန်ကပြောသံကြားလိုက်တာပါ လက်မထပ်ခင် ဇနီးမောင်နှံတွေက ဆေးလာထိုးကြပါ တယ် အဲမှာဆရာဝန်ကမှာနေသံကြားပါတယ် ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းအတူတူမနေရဘူးနော်တဲ့ ဘယ်လောက်ကြာမှဆိုတာတော့မကြားလိုက်ဘူး.. တစ်ချို့တွေကဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ကာကွယ်ပြီးသားလို့ထင်ပြီးအတူနေကြတယ် ပြီးမှ ဆရာ့ဆေးက မကောင်းဘူး ကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့ ကိုယ်ဝန်ရသွားတယ်လို့လာပြောတာလည်းကြားဖူးပါတယ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရှင်းပြစေချင်ပါတယ်ရှင့်….ဆေးထိုးပြီးဘယ်လိုအချိန်မှာမှ အတူတူနေလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပါ …..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….
ဆရာရေ ခုလိုရှင်းပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။